minthantzaww: မောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ပေါင်းသင်းခြင်းအနုပညာ
လောကကြီးမှာ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတဲ့ လူနှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရှိတယ်။ လိင်မတူတဲ့ ဒီလူနှစ်မျိုးနှစ်စားက အချင်းချင်းဆွဲငင်တတ်ကြသလို ချစ်ရည်လူးတဲ့စကားတွေကိုလည်း ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။ ယောက်ျားရဲ့အခြားတစ်ခြမ်းက မိန်းမလို့ဆိုရင် မိန်းမရဲ့အခြားတစ်ခြမ်းဟာလည်း ယောက်ျားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားမရှိတဲ့မိန်းမ၊ မိန်းမမရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဟာ အခြမ်းမပြည့်စုံသူတွေဖြစ်တယ်။ စက်ဝန်းတစ်ခုအဖြစ် အခြမ်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီး ရှေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆက်လှိမ့်နိုင်ဖို့ မောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ပေါင်းသင်းခြင်းအနုပညာကို သင်ယူတတ်မြောက်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဇနီးမောင်နှံအတွက် အမှာစကား၊ မင်္ဂလာစကားတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အဲဒီစကားတွေရဲ့ အခြေခံသဘောတရားက “(၁) တစ်ဘက်လူရဲ့ တန်ဖိုးထားနှစ်သက်ခံရသူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ (၂) တစ်ဘက်လူကို တန်ဖိုးထားနှစ်သက်တတ်သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ”ဆိုတဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ရဲ့တကယ့်အနှစ်သာရက အချင်းချင်းနှစ်သက်တာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ တန်ဖိုးထားနှစ်သက်တာကို “ပန်း”လို့တင်စားရင် အချစ်က “အသီး”ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကို ချစ်ကြောင်း အရှက်အဝံ့မရှိ ထုတ်ဖော်ပြောပါ။ ချီးမွမ်း၊ ချီးကျူးစကားပြောဖို့ ကပ်စီးမနဲပါနဲ့။ သင့်တော်တဲ့နေရာ၊ ဆီလျော်တဲ့အမူအရာနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုပြောတဲ့ “နင့်ကို ငါချစ်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ တပ်တစ်တပ်ထက် အင်အားကြီးပါတယ်။ တန်ဖိုးထားနှစ်သက်တယ်ဆိုတာက တစ်ဘက်သားကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနဲ့ အားပေးဖေးမခြင်း စတာတွေကို ခံစားစေသလို ကျေနပ်အားရတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ နားလည်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ ချီးကျူးခြင်းနဲ့ တန်ဖိုးထားနှစ်သက်ခြင်းတွေ ပါပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ရင်ထဲမှာ တန်ဖိုးထားနှစ်သက်ခြင်းက လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ပေါင်းသင်ခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းရင်ထဲက အနက်ရှိုင်းဆုံးတစ်နေရာမှာ ခံစားမှုတွေကို စုဆောင်းထားတဲ့ ဘဏ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီဘဏ်လေးထဲမှာ အချစ်နဲ့ရယ်မောစရာတွေကို အမြဲစုထားရင် ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ချမ်းမြေ့ခြင်းစတဲ့အရာတွေက တိုးတိုးလာသလို ပြုံးရယ်ခြင်း၊ နူးညံ့ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ခြင်းစတဲ့ အတိုးအမြတ်တွေကိုလည်း ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်မိ၊ မယုယမကြင်နာဖြစ်မိပြီး ဘဏ်ထဲဘာမှ မစုဆောင်းမိရင်တောင် ဘဏ်ကoverdraw မဖြစ်သွားနိုင်ပါဘူး။ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ စုဆောင်းထားတာနည်းရင်တော့ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်တိုင်း ပြင်းထန်မှုတွေ ကြီးကျယ်စေတတ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားနှစ်သက်ခြင်းကို အကြွေးစာရင်းထဲမှာပဲထားပြီး စုဆောင်းထားတာကိုပဲ အမြဲထုတ်ထုတ်သုံးနေရင်လည်း နောက်ဆုံးမှာ ခံစားချက်ပြိုကွဲခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးအက်ကြောင်းထခြင်း စတဲ့ အပျက်အဆီးထဲ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လူ့ဘဝက ရှုပ်ထွေးပွေလီလွန်းပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်မတို့ဟာ အထိန်းအချုပ်မဲ့ပြီး တစ်ဘက်လူ၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ ခံစားမှုဘဏ်အကောင့်လေး overdrawမဖြစ်သွားစေတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းက ဘဏ်ထဲကို နာလိုဖွယ်စကား၊ ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ခံစားမှု၊ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတဲ့ အပြုအမူတွေ အမြဲတမ်း စုဆောင်းနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဘနွတ်စာရေးဆရာ (Kahlil Gibran)က “နှစ်ခုကို တစ်ခုဖြစ်အောင် ပေါင်းတဲ့အထဲမှာ နေရာလပ်လေးတစ်ခုတော့ ရှိဖို့လိုတယ်”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ တယောကြိုးတွေဟာ အသံတစ်သံထဲမှာ တုန်ခါနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကြိုးတိုင်းမှာ မတူတဲ့အသံကိုယ်စီနဲ့ ကွဲပြားကြပါတယ်။ ဒါမှလည်း သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံတွေကို တီးခတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တစ်ဦးချင်းရဲ့လွတ်လပ်မှု၊ တစ်ဦးချင်းရဲ့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်။ “နင်က ငါ့ဟာပါ”လို့ သံသယမလွန်ကဲပါနဲ့။ ဒါဟာ အချစ်အိမ်လေးကို လှောင်အိမ်အချုပ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အချစ်ကို အဓွန့်ရှည်တည်တံစေချင်ရင် ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်သလို တခြားသူကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခိုင်းတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့အခြေအနေတစ်ခု၊ နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင် အချင်းချင်းထိန်းညှိဖို့၊ အတူတကွဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့မြေကြီးထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အပင်လေးနှစ်ပင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှင်သန်ကြီးထွားစေခြင်းအားဖြင့် ပျော်ရွှင်တဲ့အသီးအပွင့်တွေကို ဝေဝေဆာဆာ ဖူးပွင့်စေနိုင်ပါတယ်။
“သင့်ကို လူတွေဘယ်လို ဆက်ဆံစေချင်ရင် လူတွေကို သင်လည်းဘယ်လိုဆက်ဆံပါ”ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲဖို့ အဓိကအရေးပါတဲ့အချက်က အချင်းချင်းလေးစားတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်သားကို လေးစားတတ်မှ တစ်ဘက်သားရဲ့လေးစားမှုကိုရမှာဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားကို လေးစားတတ်ရုံတင်မက သူ့မိဘ၊ သူ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပါ လေးစားတတ်ရပါမယ်။ တကယ်လို့ တစ်ဘက်သားရဲ့မိသားစုကို မလေးစား၊ မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်။ တချို့က တစ်ဘက်ရဲ့မိသားစုကို ကိုယ့်ပြိုင်ဖက်လို သဘောထားတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန် ရုပ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့ တုံးအမှုပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထီးကျန်ကမ္ဘာထဲ တွန်းပို့နေသလို သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း ပြိုကျပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။
ငွေကြေးနဲ့အချစ်…. မိသားစုရဲ့အခြေခံမှာ ငွေကြေးနဲ့အချစ် တစ်ခုခုလစ်ဟနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ပြောနေကျစကားအတိုင်းပြောရရင် အချစ်ဆိုတာလိုအပ်သလို ပေါင်မုန့်ဆိုတာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ငွေကြေးမရှိရင် အချစ်ကိုသက်ရောက်တတ်တာကိုတော့ ဘယ်သူမှငြင်းဆန်လို့ မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးက ကောင်းကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေသလို ဆိုးကျိုးကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ မိသားစုဘဝမှာ ငွေကြေးကို အရမ်းအလေးထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ “စီးပွားရေးစီမံကိန်း”ဆိုပြီး တစ်ဘက်သားကို ထိန်းချုပ်ခြယ်လှယ်တာမျိုး၊ တစ်ဘက်သားကို ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးတာမျိုး ဖြစ်စေတတ်လို့ပါ။ သင့်ရဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းကို မခံမရပ်နိုင်တဲ့တစ်နေ့မှာ မိသားစုအိမ်ငယ်လေးထဲကနေ သူထွက်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ရောက်မှ ငွေကြေးဆိုတာ ဒြပ်မဲ့၊ လူကမှ သက်ရှိ၊ လူသာလျှင် ချစ်ခြင်းအဆောက်အဦးကြီးရဲ့ ထုပ်တန်းဆိုတာကို သင်သိလာမှာဖြစ်တယ်။
“ရှေးဘဝရဲ့အတိတ်ကံကြောင့် ဒီဘဝမှာလာတွေ့ကြတယ်”ဆိုတဲ့အတိုင်း အပြောကျယ်တဲ့လောကကြီးမှာ ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့အခြားတစ်ခြမ်းနဲ့ လာဆုံခဲ့ကြတယ်။ အတိတ်ကံ ဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့သလဲ! ဒါကြောင့် ဒီကံကို ကျွန်မတို့တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဖူးစာကံကြောင့် လာဆုံကြတဲ့ ဒီအိမ်ထောင်ရေးကို တီဗီကြည့်သလိုမျိုး အချိန်မရွေး ဟိုချန်နယ်ချိန်း၊ ဒီချန်နယ်ချိန်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပထမအိမ်ထောင်ရေးမှာ တည်ကြည်လေးနက်မှုမရှိသူဟာ ဒုတိယအိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း ကောင်းကောင်းလည်ပတ်စေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ အသိဉာဏ်ရှိမှုနဲ့ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ခံစားချက်တွေက ယောက်ျားနဲ့မိန်းမရဲ့ ပေါင်းသင်းခြင်းတည်မြဲရေးကို သက်ရောက်စေတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကယ်တင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့ သေကွဲအိမ်ထောင်ရေးမဟုတ်ခဲ့ရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကုသပါ။ လက်စတွဲပြီဆိုတာနဲ့ “ပျိုမျစ်တဲ့လက်ကနေ အိုမင်းတဲ့လက်ဖြစ်သည်အထိ” တွဲပါ။ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်၊ အခက်အခဲလေးတစ်ခုကြောင့်နဲ့ လက်တွဲမဖြုတ်လိုက်ပါနဲ့။
လူအများက “အချစ်ခံ”ရတာကို နှစ်သက်တတ်ကြပြီး “ချစ်ဖို့”ကိုတော့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုချစ်ဖို့ကောင်းအောင် နေမလဲဆိုတာကိုပဲသိကြပြီး တစ်ဘက်သားကို ဘယ်လိုချစ်မယ်၊ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းကိုတော့ စမလှမ်းချင်ခဲ့ကြဘူး။ တကယ့်အချစ်က အရာရာအားလုံးကို “ပေးဆပ်”တာပါ၊ “ရယူ”တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ သူ့ရဲ့ခွန်အားကို တက်ကြွစေတာပါ။ ပေးဆပ်ခြင်းက ရယူခြင်းထက် လူကိုပိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ ပေးဆပ်လိုက်ရလို့ ဆုံးရှုံးချို့ငဲ့သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေးဆပ်လိုက်ရလို့ ဘဝကဖြစ်တည်သွားတာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့အရာပါ။ အချစ်ထဲမှာ တောင့်တမှုတွေ၊ အကျိုးအမြတ်တွေ ရောစပ်မနေသင့်ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ မျှဝေခြင်းပါ၊ တစ်ဘက်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာထဲမှာ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်း၊ လေးစားခြင်း စတဲ့အသိဉာဏ်တွေ ပါပါတယ်။ “သူ့ထဲမှာ ကိုယ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထဲမှာ သူရှိ”တာဟာ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြင်နာတတ်သူနဲ့အကြင်နာခံချင်သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူက လူတွေကိုပဲကြင်နာတတ်ပြီး အကြင်နာမခံချင်တဲ့ ဖခင်လိုယောက်ျားမျိုး၊ မိခင်လို မိန်းမမျိုးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဇနီးမောင်နှံဆိုတာ တူတစ်စုံနဲ့တူပါတယ်။ ဘဝထဲက ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်၊ ခါးအရသာတွေကို အတူတကွ ခံစားသင့်ပါတယ်။ သူ(သူမ)အလုပ်ပြန်ချိန် ရေအေးလေးတစ်ခွက်ကမ်းတာ၊ သူအိပ်ပျော်ချိန် စောင်လေးခြုံပေးတာ… ဒါတွေဟာ မပြောပလောက်တဲ့ အပြုအမူဆိုပေမယ် အချစ်ကို အဓွန့်ရှည်စေတယ်၊ အကြင်နာတွေ နှလုံးသားထဲ တစိမ့်စိမ့်ဝင်စေတယ်၊ အိမ်ထောင်ရေးကို ထာဝရတည်မြဲစေပါတယ်။
ဝတ်စားဆင်ယင်မှုရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်က ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းဆိုရင် အချစ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်က ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလုံး အချင်းချင်း လိုက်လျောညီထွေအောင် နေတတ်ရုံမက အပေးအယူလည်းသင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အိမ်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း ပြောဖို့နေရာလေးပါ။ အကျိုးအကြောင်းမသင့်တဲ့အရာတွေ ငြင်းခုန်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးက “မင်္ဂလာမဆောင်ခင် မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် မျက်လုံးတစ်လုံးကို မှိတ်ထားပါ”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်း ခြောက်ပစ်မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီလူကို ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာက သူ့မှာ သင့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာ ရှိခဲ့လို့ပဲ မဟုတ်ပါလား?
တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ကို သင်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အရာရာကို ခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ကို သင်ခွင့်လွှတ်နားလည်တယ်ဆိုရင် သူ့ကိုသင်အရမ်းချစ်လို့ပါပဲ။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းက အချင်းချင်းဆက်ဆံပြောဆိုမှုကို ချောမောပြေပြစ်စေနိုင်သလို သင့်ကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာပြောရွှင်မှုတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဇနီးမောင်နှံကြားမှာ အချင်းချင်း “နားလည်”တတ်ရပါတယ်။ “နားလည်ခြင်း”ဆိုတာ အရှုံးနဲ့ သင်ရင်ဆိုင်ရချိန် သင့်ကိုလေးစားမှုပျက်စေတဲ့စကား မပြောသူ၊ သင်စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ချိန် သင့်ကို လေသံချိုချိုနဲ့ ရှင်းပြဖြေရှင်းချက်ပေးသူ၊ သင်စိတ်ဆင်းရဲချိန် သင့်ကိုဝန်မပိုစေသူ၊ သင်ပြုံးရင် သူအရင်ရယ်သူ၊ သင်စိတ်ညစ်ရင် သူအရင်စိတ်ပူတတ်သူ၊ သူပျော်တာတွေ သင့်ကိုပြောပြတတ်သူ၊ သူစိတ်ညစ်တာတွေ သင့်ကို မသိစေချင်သူ၊ မိုင်ပေါင်းထောင်သောင်းဝေးလည်း သင့်ကို ယုံကြည်စိတ်ချသူ… နားလည်တတ်ဖို့ ဂရုစိုက်ကြင်နာခြင်းတွေလိုအပ်သလို ချစ်ခြင်းတွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by minthantzaww at 07:49
အင်းကိုသန့်ရေ အဲစာသားလေးထဲကအတိုင်းဆိုရင် အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာပါ ဇနီးမောင်နှံအားလုံး လိုက်နာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် အားလုံးဘဲချစ်ခင်တတ်ကြပါစေ အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့ပေ့ါ :P